Man Utd Oo Isha Ku Heysa Inay Lasoo Saxiixato 21-jir Daafaca Dhexe Uga Ciyaara Braga
HomeSuuqa kala iibsigaMan Utd oo isha ku heysa inay lasoo saxiixato 21-jir daafaca dhexe uga ciyaara Braga
Daafaca kooxda Braga ee David Carmo ayaa lagu soo waramayaa inuu noqon doono bartilmaameed lama filaan ah ay indhaha ku hayso kooxda Man Utd
21 jirkaan, oo lagu xamanaayay inuu u wareegayo AS Roma iyo Fiorentina xagaayga hore laakiin waa suurta gali weyday. waxaa oo tan iyo markii uu kasoo muuqday kooxdiisa ciyaaray 23 kulan oo heerka koowaad ee horyaalka Portugal.
Carmo ayaa ganaax ku seegay labadii kulan ee ugu dambeeyay Braga ee kulamada Horyaalka Portuguese-ka, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ahaa mid joogto ah horaantii xilli ciyaareedkii 2020-21, isagoo horeyba sideed kulan ugu ciyaaray magiciisa tartamada oo dhan.
Sida laga soo xigtay ESPN, kooxda 20-ka jeer heysata horyaalka Ingariiska ayaa isha ku haya daafac dhexe, waxa ay doonee in lasoo wareegto bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga kadib dhaawacii Eric Bailly sidookalene ay doonayaan in ay iibiyaan bisha Janaayo.
Carmo hormarka oo sameeyey waxaa kamid ah in oo ka caawiyay xulka 19 jirada Portugal inay ku guuleystaan ​​Koobka Qaramada Yurub ee U19.
Warbixinta, si kastaba ha ahaatee, waxay soo jeedineysaa in Red Devils ay ku qasban tahay inay u wareejiso midkood Mrcos Rojo ama Phil Jones, oo labadoodaba boos ka heysan Old Trafford, si ay ugu dhaqaaqaan Carmo.
Kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa sidoo kale sii waday xanta ay ku heli karto adeega daafaca dhexe ee RB Leipzig Dayot Upamecano iyo Schalke 04 sta Ozan Kabak, si kastaba ha ahaatee, waxay tartan adag kala kulmi doonaan kooxda ay xafiiltamaan ee Liverpool.